उम्मेदवारहरूले हाले भोट: कसले के भने त? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारउम्मेदवारहरूले हाले भोट: कसले के भने त?
उम्मेदवारहरूले हाले भोट: कसले के भने त?
May 19, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
‘चुनाव त आउँछ जान्छ तर यहाँ सबैले शान्ति बनाएर राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले दुश्मनीको भावना लिनुहुँदैन। जनताले जसलाई चुन्छ ती नै सर्वोपरी हुन्।’
दार्जीलिङ, 19 मई
अमरसिंह राईले राजिनामा दिएपछि दार्जीलिङको विधानसभा आसनको लागि चल्तीका नेताहरू भिडेका छन्। आज बिहान 11.30 देखि विधानसभा उपचुनाउ सम्पन्न भइरहेको छ। 321 वटा मतदान केन्द्रहरू चुनाउ भइरहेको छ।
चुनाउमा निर्दलीय प्रार्थीका रूपमा स्वाराज थापा, भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बा, निर्दलीय प्रार्थी विनय तामाङ, जनआन्दोलन पार्टीका अमर लामा, निर्दलीय शारदा सुब्बा राई अनि कामपाका केबी वातरबीच भीडन्त छ।
सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो मत खसाली सकेका छन्। तर यसैबीच उम्मेदवारहरूले एकार्कालाई दोषारोप शुरु गरेका छन्।
स्वाराज थापाले निरज जिम्बा र विनय तामाङले चुनाउ आचार संहिता उलङ्घन गरेको आरोप कसेका छन्।उनले चुनाउ आयोगमा गुनासोसमेत दर्ता गरेका छन्।
समुहले चुनाव आचार संहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै चुनाव आयोगमा अभियोग दर्ता गरेका छन्।
‘बुथ भ्रमणक्रममामैले देखें ठाउँहरूमा भाजपाका बुथ एजेन्टहरूले संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। निरज जिम्बा त अझ आफ्नो चुनाउ चिन्ह भएको वाहनमा हिँडिरहेका छन्। बुथ एजेन्टहरूले पनि बुथभित्रै भाजपाको चिन्ह भएको परिचय पत्र लगाएर बसेका छन्,’ थापाले भने, ‘यो चुनाव आचार संहिताको उल्लङ्घन हो। मैले चुनाव आयोगसमक्ष लिखित अभियोग दर्ता गरेको छु।’
यता विनय तामाङका समर्थकहरूले पनि दार्जीलिङ ब्लूमफिल्ड पुलिङ बुथ नजिक विनय तामाङको चुनाव चिन्ह लिएर बुथ नजिक बसिरहेको उनको आरोप छ।
यता जिम्बाले आफ्नो जित निश्चित रहेको ठोकुवा नै गरे। ‘मैले जित्नु भनेको पहाडले जित्नु हो,’ उनले भने, ‘निष्पक्ष चुनाउ भयो भने म धेरै मतले जित्नेछु।’
अमर लामाले आफ्नो मतदान केन्द्रमा केन्द्रिय बलको साटो पुलिस बसिदिएको बताएका छन्। ‘कुनै पनि मनपरी नहोस्,’ उनले भने, ‘सचेत भोट हाल्नुहोस्।’
विनय तामाङले पनि आफ्नो जित रहेको ठोकुवा गरे। यद्धपि उनले चुनाउबारे होइन चुनाउपछिको कुरा गरेका छन्। ‘चुनाव त आउँछ जान्छ तर यहाँ सबैले शान्ति बनाएर राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले दुश्मनीको भावना लिनुहुँदैन। जनताले जसलाई चुन्छ ती नै सर्वोपरी हुन्।’
तामाङको मत छ, राजनैतिक दलहरूले चुनावलाई भन्दा धेर भाइचारा कायम राख्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ। तृणमूल कङ्ग्रेसविरुद्ध विद्रोही गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खड़ा भएकी शारदा सुब्बाले पनि आफ्नो जीत निश्चित रहेको दाबी गरेकी छन्।
शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली र मनोपोली भयो? यो फारममा सबै विवरण दिनुहोस्, यो फारम-मा तपाईँको गोपनियताको ग्यारेन्टी छ
चर्चित बन्दै सोनु-को भन के गरूँ
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (36,303)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (32,791)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (29,906)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (28,690)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (25,209)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (22,372)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (21,155)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (20,190)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (20,098)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (19,724)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (19,471)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (18,625)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (18,515)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (18,397)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (18,151)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (18,018)